🥇 uphicotho lomsebenzi wamazinyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 647
Ividiyo yokuphicothwa komsebenzi woogqirha bamazinyo
Yenza iodolo accounting yomsebenzi wamazinyo
Oogqirha bamazinyo kunye nemibutho yamazinyo zihlala zifunwa kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, wonke umntu ufuna ukuba uncumo lwakhe lube luhle. Ugcino-mali lwamazinyo ludinga ulwazi lweenkqubo, uluhlu lwamaxwebhu kunye neengxelo ekufuneka ugqirha wamazinyo azigcine, kunye nezinye ezininzi. Kwindlela yokukhawulezisa rhoqo kunye nokukhula kwinani lemisebenzi, kukho imfuneko engxamisekileyo yokwazisa ngokuzenzekelayo kwi-accounting yomsebenzi wamazinyo ngokuphumeza inkqubo ekhethekileyo yoogqirha bamazinyo abasebenza kwi-accounting. Ngethamsanqa, inqanaba loncedo lwezonyango belisoloko lihambelana namaxesha, kusetyenziswa izibonelelo zamva nje zeembono zabantu kwicandelo labo. Namhlanje, ukuthengisa okuhlala kuguquka kwetekhnoloji yolwazi kunika wonke umntu uluhlu olukhulu lweenkqubo zokuzenzekelayo zokwenza ingxelo yomsebenzi wamazinyo ukuzisa ukwenziwa kwengxelo kunye nolawulo lwabasebenzi bemibutho eyahlukeneyo. Ezo nkqubo zokunikwa kwengxelo ngugqirha wamazinyo zikuvumela ukuba ulibale obu buphupha bokwenza amaxwebhu kunye nokukhangela isigulana kugqirha wamazinyo, irekhodi lemihla ngemihla yemisebenzi yogqirha wamazinyo kunye nedayari yemisebenzi yogqirha wamazinyo.
Ngoku irekhodi leenkqubo kunye nexesha lokusebenza kugqirha wamazinyo kunokugcinwa kwisicelo esinye. Ngokukhawuleza uyaqonda ukuba kukhululeke ngakumbi kwaye kuyakhawuleza. Abanye abantu bakhetha ukukhuphela inkqubo yogcino-zincwadi lomsebenzi wobugqirha kwi-Intanethi ukugcina iindleko. Le ndlela ayichanekanga ngokusisiseko, kuba akukho mntu unokuqinisekisa ngokhuseleko lwedatha efakwe kwisicelo sokunikwa kwengxelo yolawulo lomsebenzi wamazinyo. Oochwephesha kunye nabadwelisi benkqubo ngazwinye bacebisa ukuphumeza isoftware kuphela yobalo lomsebenzi wobugqirha kwiingcali ezithembekileyo. Olona phawu luphambili lomgangatho wenkqubo kukuhamba nenkxaso yenkqubo yobalo ngomsebenzi wamazinyo. Ukuza kuthi ga ngoku, enye yeenkqubo zokunikwa kwengxelo yolawulo lomsebenzi wamazinyo sisiphumo somsebenzi weenkqubo ze-USU-Soft application. Yenziwe ngempumelelo iminyaka eliqela kwimibutho eyahlukeneyo yeRiphabhlikhi yaseKazakhstan, nakwamanye amazwe. Ukubonakala ngokukodwa kwesoftware yolawulo lomsebenzi wamazinyo kukulula kwimenyu yenkqubo yogcino-zincwadi yomsebenzi wamazinyo, kunye nokuthembeka kwayo. Inkxaso yezobugcisa yenziwa kwinqanaba eliphezulu lobungcali. Ukuba abantu abayikhangeli iklinikhi ethile, kodwa bafuna inkonzo (umzekelo, 'ukunyanga ukubola kwamazinyo', 'ukuzaliswa', 'lungisa amazinyo akho'), kukho ukhuphiswano olunzulu ngokubonakala. Kuya kufuneka utyale imali eninzi kwintengiso yemeko kunye / okanye kwi-SEO ukukhuthaza iwebhusayithi yakho. Umxholo wentengiso (ngesiqhelo amakhonkco amabini okanye amathathu aphezulu kwiphepha lokuqala leziphumo), anokukhokelela hayi kuphela kwiwebhusayithi yenkampani ephambili, kodwa nakwiphepha lokufika-indawo enye-yephepha, ebonisa inkonzo ethile. Abathengi banokukutsalela umnxeba kwiikhonkco, okanye bashiye isicelo kubo.
Kodwa nayo le ayisiyanele. Iindawo 'eziphambili' kwiphepha lokuqala leziphumo zophando ngoku 'zisezandleni' zabahlanganisi abakhethekileyo abaqokelela ulwazi malunga nayo yonke imibutho apho abantu banokufumana khona inkonzo abayifunayo. Abona 'badlali baphambili' kwicandelo lezonyango eRashiya ziinkonzo zeNaPopravku, iProDoctors, kunye neSberZdorovye (eyayisakuba yiDocDoc). Ukwenza kube lula kubathengi abanokubakho ukuba bakufumane kwezi ndawo, uhlala ucelwa ukuba uthumele ishedyuli yakho apho. Ukudibana nabadibanisi ngokuqinisekileyo kuyinto eyenziwayo kule minyaka imbalwa izayo, kwaye ayinakuhoywa. Ukuba imodyuli yokuthengisa ixhunyiwe, unokurekhoda zonke iifowuni eziza ekliniki, shiya amagqabantshintshi kwincoko nganye kwaye usebenzise la magqabaza ukuqeqesha abasebenzi kunye nokuphucula umsebenzi wabo. Ngenkqubo yobalo-mali lomsebenzi wamazinyo ungachonga ngokukhawuleza ukuba ngubani obizayo. Xa umlawuli efumana umnxeba, kuya kufuneka acofe iqhosha 'leefowuni ezingenayo' kwimenyu esekhohlo. Iwindow ephumayo iya kuvula phambi kwakhe ngolwazi lwesigulana. Umsebenzi wasekliniki uyakwazi ukumothusa lo mntu umbizayo ngokumbiza ngegama. Ukongeza, umlawuli ubona ijelo lentengiso (ukuba lichaziwe) apho isigulana sifowuna khona kwaye, ukuba iklinikhi inezikripthi ezahlukileyo zokunxibelelana nabantu abatsala umnxeba kwiindlela ezahlukeneyo, sebenzisa eyona ilungileyo.
Abalawuli bamazinyo banamhlanje kuya kufuneka ukuba baphathe kungekuphela iifowuni, kodwa kunye nemiyalezo evela kubathengi abanokubakho kunxibelelwano lwasentlalweni, usetyenziso oluvela kubalungelelanisi kunye namaphepha ewebhu. Ungagcina amanani kuzo zonke ezi ntlobo zonxibelelwano kwi-USU-Soft application. Ukongeza, unokurekhoda incoko nabantu abangena nje kwiklinikhi yakho ukubuza imibuzo buqu. Sibiza zonke ezi zinto kunye phantsi kwegama 'unxibelelwano'.
Uyilo lwesicelo sobalo-mali yinto esizingcayo ngayo. Sityalile ixesha elininzi kunye namandla ukwenza into entsonkothileyo kwaye elula ngexesha elinye. Intsonkothile ngengqondo yokuba inkqubo yogcino-zincwadi lomsebenzi wamazinyo isebenzisa itekhnoloji yale mihla kwaye yenza imisebenzi eyahlukeneyo, apho ubona iziphumo ezigqibeleleyo kunye nokuchaneka kwedatha. Ilula ngendlela yokuba abasebenzisi abanangxaki ekusebenziseni usetyenziso, kunye nokuba ababuboni ubunzima beenkqubo zangaphakathi kwaye abacingi nokuba zintsokothile. Konke abakubonayo kumphezulu ngumsebenzi ogqibeleleyo kunye neziphumo ezibalaseleyo. Sebenzisa usetyenziso lolawulo lwazo zonke iinkqubo zeziko lakho lonyango kwaye ubaleke bonke abo ukhuphisana nabo.